China Horizontal Casting Machine Manery ny fasika Casting flaskless koronosy Line sy ny mpamatsy | Sofiq
Masinina manipy marindrano mametaka fasika atsipy amin'ny fantsom-pandrefesana flaskless
Milina fanefitra fasika avo lenta
30-90 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola
Ny rafitra fitrandrahana fasika maintso dia manome fikirakirana bobongolo azo antoka sy haingana mandritra ny fanasitranana.
Ny rafitra fikirakirana ny bobongolo dia namboarina mba hifanaraka amin'ny fantsom-boaloboka tsirairay amin'ny alalàn'ny fitambarana vokatra mahazatra.
Ny fikajiana ny rafitra dia afaka manatsara ny famokarana.
Kely ny mpiasa no ilaina.
Azo noforonina araky ny habaka misy.
Ny fizarana SF marindrano sy ny tsipika volom-borona mitifitra dia manaparitaka ny fitifirana fasika, miaraka amin'ny fisarahana, ny tavoara ary ny lanjany. Fiorenana mora, asa mora, mandeha ho azy avo lenta, ny tsipika famolavolana dia be mpampiasa amin'ny famokarana betsaka ho an'ny casting kely. Ny tsipika iray manontolo dia misy milina famolavolana, tsipika conveyor fasika, solika fitetezana ary fitaovam-pandrefesana milanja, fitaovam-pitaterana fitaterana sy fitaovana fampandehanana, fehikibo fampangatsiahana miaraka, milina manidina sns.
Weifang Sofiq Machinary Co., Ltd. dia orinasa siantifika sy teknolojia, miorina ao amin'ny distrikan'i Weifang City Hanting akaikin'ny lalana Beihai, fitaterana mety. H anshuo Masinina dia mirotsaka amin'ny famokarana masinina famokarana matihanina mpamatsy, famolavolana sy fanamboarana ireto vokatra lehibe manaraka ireto: flask sy pallet fiara ho an'ny tsipika famolavolana, tsipika famolavolana tsindry static mandeha ho azy, tsipika mandeha ho azy, semi-automatique an'ny tsipika famolavolana tavoahangy, fantsom-bokotra automatique slip tsipika famolavolana, milina mandraraka semi-mandeha ho azy ary ny milina mpanampy amin'ny tsipika fanoratan-tsolika, tsipika fanodinana mekanika, tsipika famolavolana mekanika, BLT, JYB andian-dahatsoratra mpampita ary mpanelanelana takelaka tsy mahazatra.
1. Mpanamboatra na orinasa mpivarotra ve ianao?
Mandray anjara amin'ny casting mpamatsy mpanamboatra matihanina mpamokatra milina isika
2. Ahoana no hahazoako santionany?
Raha ilainao izany dia faly izahay manolotra anao santionany maimaimpoana, fa ny mpanjifa vaovao kosa dia antenaina handoa ny saram-pandefasana entana, ary hofongorana amin'ny fandoavana lamina ofisialy ny mpanjifa vaovao.
3. Azonao atao ve ny manao casting arakaraka ny sary?
Eny, afaka manao casting izahay araka ny sary nataonao, sary 2D, na maodely cad 3D. Raha azo omena ny maodely cad 3D, dia mety hahomby kokoa ny fampiroboroboana ny fitaovana. Fa raha tsy misy 3D, mifototra amin'ny sary 2D dia mbola afaka manao ny santionany ekena tsara isika.
4. Azonao atao ve ny manamboatra casting mifototra amin'ny santionanay?
Eny, afaka manao fandrefesana miorina amin'ny santionanao izahay mba hanao sary amin'ny fanaovana fitaovana.
5. Inona ny fitaovana fanaraha-maso kalitao an-trano?
Manana spectrometre ao an-trano izahay hanaraha-maso ny fananana simika, ny milina fanandramana am-pahefana hifehezana ny fananana mekanika sy ny UT Sonic ho toy ny fomba fanaraha-maso NDT hifehezana ny fitiliana eo ambanin'ny fanariana.
Teo aloha: Safidy lehibe ho an'ny faritra misy ny fiara ao Shina Manamboatra milina fametahana milina fanodinana otrikaina mpamatsy fiara
Manaraka: Vidiny ambongadiny China Disa Casting koronosy fonosana Flask Pallet amin'ny kalitao avo lenta
Tsipika fandefasana fasika maintso mandeha ho azy
Tsipika bobongolo tsy misy fotony mandeha ho azy
Milina famolavolana fasika mandeha ho azy
Masinina tsy misy tavoahangy ho an'ny famolavolana
Flaskless koronosy tsipika
Famolavolana fanodinana vy
Famolavolana famolavolana flask
Sandbox, Famolavolana tavoahangy, Masinina bobongolo, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Milina Punch Out, Famolavolana koveta fanariana,